Jwxo-shiil, 21 Sano ayuu Soomaaliya ka Xabkaystay Ogadeeniyana Sidii buu Mooday [Khadiir Lama Dhufuu] – Rasaasa News
Jun 27, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Xuusaanyahow hadaad xeel taqaan nama xumayseen, Xun Xunki kaleetiyo Adiga oo Xabshidii haysta, xoriyadii aan sugayniyo maxaa xalane kuu geeyey, xumo lama abuurtee xiskiyo Jwxo-shiil maxaa xayadii kaa qaadaday.
Aqoon la,aan wiil iyo habartii bay isu gaysay, waxaan uga dan lee yahay Oromada ayaa waxay ku maahmaahdaa marka ay arkaan ruux fursad badan soo helay oo wax badan soo cunay oo aan fursadii hore ku wax qaadan walina sii doonay fursad kale [Khadiir lama dhuftuu] oo macnaheedu yahay “khadar laba goor ma yimaado”.
Jwxo-shiil, waxaa na loo sheegay in uu ahaa nin yari kaga cararay dhulka Somalida Ogadeeniya, colaad dhexmartay beeshiisa iyo beel ay wada dhasheen oo ay hadana ood wadaag ahaayeen, sida na loo sheegay waxaa la dilay labo walaalhihiisa ah oo kolkii dambe uu isagu ubadkoodii soo koriyey, waxaana lafihiisa u cararay isaga oo aanay cidi la soconin, wuxuuna galay dalka Somaliya.
Waxaa uu damcay in uu galo askartii Somaliya ee sanadkii 1960/4, waagaas waxaa askarta lagu xulan jiray joog iyo Jamaal, waxaan uu saddex goor ku hadhay sida na loo sheegay xulashadii askarta sababo Itaal. Maadaama oo uu geel jire ahaa oo uusan Quraanka aqoonin ayaa waxaa uu ka mid noqday dhalinyaradii quraanka ka gashay mowlac ku yaalay xaafada siigaale ee degmada Hodan, ka dibna waxaa uu galay iskuul diini ah oo ay lahayd Masaridu oo kolkii hore la odhan jiray Jamal Cabdi Naasir kolkii dambena loo bixiyey Sheekh Cali Suufi.
Bal day nasiibka, 5 sano ka dib isaga oo xidig leh ah ayuu madaxa u noqday ragii askarta u diiday, sidda na loo sheegay sanadkii 1972, isaga oo labo xidgle ah ayuu xidhxidhay dhalinyaro badan oo sida naloo sheegay uu ka mid haa Maxamed Uur-Doox, Cabdiraxmaan Yuusuf Magan, Gadh Iska-doon, Cabdiraxmaan Indha Gaale iyo qaar kale oo aad u badan, ragaas oo u ololaynayey hordhicii halgankii Somali Galbeed. Xiligaas oo aan la arki karin wax dhaqdhaqaaq siyaasadeed ah, balse aanay jirin wax diiday in dadkani ay dalkoodii u halgamaan waxaa uu ahaa ninka kaliya ee u dhashay Ogadeen ee diiday in loo dagaalamo dhulkaas.
Jwxo-shiil, lama maqal wax abaal ah oo uu u galay dadkii reer Ogadeeniya ee ku qaxay dalka Somaliya, balse waxaa uu ahaa nin ay cuqdadidi buux dhaafisay, oo dad u neceb raga ay isugu xigaan, waxaa uu colaad aan dhamaad lahayn u qabay Eebe ha u naxariistee Maxamed Cumar Jees oo uu dhawr goor Madaxmed siyaad Bare ku yidhi Maxamed Cumar Jees, war ninkan maxaa dambi ah oo aad ka gashay. Maxamed Cumar Jees oo ahaa nin calool xaadhan oo aan la soconin arimahan, Jwxo-shiil waxaa calooshiisa ka buuxay cuqdad dilkii walaalhiis oo ay dileen rag ay isku dhaw yihiin Maxamed Cumar Jees.
Waxaa kale oo uu aad u necbaa Cabdiwahaab Makaahiil oo isaguna Madax ka ahaa ciidankii guul wadayaasha Somaliya iyo waliba Aadan Kuukaay oo ahaa taliyihii Ciidanka Booliska somaliya, wax kalena ma ahayn baa la yidhi colaadu ee waxaa uu maqli jiray labada reer waxay lee yihiin xin walaalnimo, isagu waxaa uu u qaatay mid cadaawad. Lama sheegin Jwxo-shill in loogu yeedho in uu ka talo bixiyo dhibaatooyinkii badnaa ee dadweynaha Somalida Ogadeeniya ku haystay Somaliya. Waxaan xusuustaa xiliyadii ay Somaliya gilgilanaysay ayaa General Cisman Gaab Eebe ha u naxriistee la yidhi hawl baa laguu dirayaa ee kac oo bal kala soo tasho saraakiisha iyo madaxda beeshaada waxa ay ka qabaan, kulankii oo uu yimid Maxamed Siyaad Bare Jwxo-shiil kuma jirin rag meeshaas yimid, kolkaas ayaa wuxuu maxaad uga reebtay Maxamed Cumar, Cismaan Gaab waxaa uu yidhi “ninkaasi adiguu kuu shaqeeyaa ee reerka aan ka dhalanay uma tirsana”.
Jwxo-shiil amarkiisu ka mid buu ahaa, xadhigii 15kii wiil ee ururkii dhalinyarada Somalida Ogadeeniya, kolkii ay bilaabeen abuuritaanka ururka ONLF. Jwxo-shiil wax uu taro daayoo waxaa nasiib la joogay, hadii uu nabad galiyo dadka uu ka dhashay.
Burburkii Somaliya waxaa uu ahaa ninkii ugu sareeyey ee ay qabataan ururadii qabiil ee Somaliya Aafeeyey, waxaana loogu tagay xeradii ciidankii uu taliyaha ka ahaa oo uusan waligii ka guurin, waxay ogaayeen in uusan waxba goynin waxayna in badan ku hayeen Isbitaalkii Booliska kolkii dambana Nairobi ayey keeneen.
Nasiibku waa ka geeyey Ingriiska, oo kolkaa ay joogeen Madaxdii ururka ONLF ee isaga magaciisa mar labaad damacday in ay bulshada ku soo dhex celiso, waxaana loo sheegay in uu bulshada dhex galo oo uu aroosyada tago bal si uu indhaha u furo, arooskii ugu horeeyey ee uu tago waxaa lagu qabtay xaafad ku taal waqooyiga London, waxaana keenay Maxamed Siraad oo kolkaa doonayey in uu dib u qarameeyo bal in uu saaxiibo u kasbi karo ONLF. Intii arooska lagu jiray ayuu Dr. Dolal sidii caadada u ahayd ka sheekeeyey Ogadenia, kolkaas ayuu Jwxo-shiil yidhi, war waa qabiile eraygaas maad iska daysid.
Fagaare lagu arko waxaa xigay isaga oo la lee yahay waa kaadir ONLF, ayuu soo qaatay calanka Kilil5, kolkaas ayey dadkii yaabeen oo yidhaahdeen, hadii safaarada lagu banaan bixi maxaa calanka kilalka loo wataa, waana laga kari waayey.
Nasiib badanaa ma dawacaa, waxaa uun hal mar lagu baraarugay isaga oo la lee yahay waxaa uu madax u yahay ONLF, waxaana ururka iskaga baxay dad badan, kolkii ay arkeen isaga oo madax u noqday ONLF. Waxaa xigay in uu ururka dhax keenay wixii uu Somaliya ka bartay sidda; qabyaalada, nacaybka, iska horkeenka, necbaysiinta halganka dadka. Waxaa xigay ileen waligiiba wuu bukay oo waxaa ka dhaadhacsanaa in dilkii walaalihii ee bariga fog, in uu mar uun iska hor keeno ragii dheefta wadaagi jiray ee ururka ONLF, waxaana uu colaad u qaaday ninkii isaga abaalka weyn u galay wuxuuna ugu abaal guday in uu xabad ku dhufto.
Jwxo-shiil kama fikirin waxa ku dhici kara isaga, waxaa kale oo uusan ka fikirin dhibaatada ay u keeni karto dadweynaha Somalida Ogadeeniya falka uusan ka fiirsan, waxaa kale oo uusan hubsnin dadka uu doonayo in uu ka aar goosto in ayna ahayn kuwii 35 ka hor dakana uu wali la buko ka galay.
Waxaan filayaa in uu somaliya in badan ka xabkaystay, laakiin ayna suurto gal noqonaynin in uu ka samata baxo sunta uu ku shubay somalida Ogadeeniya.